Wararka - Macluumaadka Warshadaha
Soosaarida dusha u adkaysta daxalka ee aagga dusha sare ee taabashada gaaska kulul ee kululeeyaha kululeeyaha birta, qaybaha u dhigma ee caaryada tuubbada waxaa lagu daaweeyaa dhaqmo madow oo ka kooban walxo isku dhafan, doorbidaya 40- 50% ferrosilicon, kaas oo u beddelaya aagga cidhifka birta aan wali la adkeynin ee loo tuuro maqaarka daadinimada u adkeysata
Baahida loo qabo xakamaynta alaabta ceeriin waxay muhiim u tahay guusha wax soo saarka birta ee nidaamka greensand. Ciidda silica ee salka ayaa badanaa la iska indhatiraa iyadoo diiradda la saarayo ku darista bentonite. Waxyaabaha lagu daro Kaarboon-Carbeed waxaa loo qaadan karaa "shar shar ah" si loo hubiyo dhammaystir wanaagsan oo dusha sare iyo yareynta cilladaha dusha la xiriira ciidda. Waxyaabaha kale ee lagu daro waxaa loo isticmaalaa marka nidaamyadu ay ka baxaan isku dheelitirnaanta kuwanna markaa waxay sii kordhinayaan dabeecadda adag ee nidaamyada cagaaran iyo nidaamka. Kaararka loo baahan yahay udub dhexaadka tani waxay noqoneysaa arin aad u weyn maadaama nidaamyo badan oo kaladuwan oo kaladuwan loo shaqeeyo wax soo saar asaasi ah waana in kuwan la tixgeliyaa marka la xakameynayo heerarka kaarboonka iyo qiimeynta guud ee nidaamka ciidda
Saameynta mataanaha ee kaarboonka dheeriga ah iyo luminta-dabka iyo guud ahaan qiimeynta ciidda waxay u baahan yihiin fahan taxaddar leh iyo xakameyn. Hababka kontoroolka kala duwan ayaa la baaraa oo ay ku jiraan hababka dhaqameed sida isbeddelka iyo luminta-dabka oo ay weheliyaan hababka go'aaminta bentonite iyo hababka qiimeynta. Hababka xakamaynta cusub sida kaarboonka guud ayaa dib loo eegaa iyadoo ay weheliso xirmada guud ee tijaabooyinka iyo hababka xakamaynta.
Hababka saadaalinta kala duwan ayaa loo eegay inay yihiin muuqaal xakameyn ah sidoo kale. Tayada wax lagu daro iyo kaalintooda iyo ka sii muhiimsan ee isdhexgalkooda waa la muujiyey, maadaama tani ay tahay aag inta badan la dayacay maadaama ragga aasaasiga ah ay u dagaallamayaan guusha ku saabsan tayada tayada joogtada ah. Imtixaannada kontoroolka ee soo-socda ee la soo jeediyey ayaa laga wada hadlayaa isbahaysiga ku darista makiinadda.
Sidoo kale dib loo eegay waa fasiraadda natiijooyinka iyo ficilka loo baahan yahay si loo hubiyo xakamaynta iyo ka sii muhiimsan tayada tayada joogtada ah ee nidaamka greensand iyadoo xoogga la saarayo fahamka iyo xakamaynta waxyaabaha lagu daro karboolka ee waxqabadka shubay